Wararka | December 2019
Qalabka waxtarka leh iyo ka hortagga lime ee caafimaadka aadanaha
Editor Ee Doorashada December 5,2019
Ugu Weyn Ee Wararka
10 codsiyada ugu fiican ee loogu talagalay beerta iyo beerta
Koraaya dhirta kala duwan ee dhirta iyo miraha iyo khudaarta cagaaran waxay noqotey hiwaayad fara badan oo malaayiin qof ah. Mid kasta oo ka mid ah kuwa bannaanka u qaadaan dadaal badan si ay u dalagaan dalagga ka fiican kuwa kale. Da'da tiknoolajiyada macluumaadka sare, talooyin badan iyo talooyin waxtar leh oo ku saabsan dhirta sii kordhaya ayaa laga heli karaa internetka.
10 qarsoodi ah qajaarka la kariyey iyo qajaarka
Miiska miiska, qajaar la qabadsiiyay ayaa leh meel qadarin leh. Hooyooyinka intooda badani waxay ogaadaan in diyaarinta khudradda xagaaga ay fududahay, hase yeeshee dad badan oo fikradani waxay ku dhamaanayaan fashilka. Sidaa darteed, waxaa habboon in la ogaado sirta waxtar leh. Xeerarka xulashada khudradda Bixinta kala duwan. Fure, Nezhinsky, tartan, Murom, Nosovsky, Era, Heerka, Cascade, Voronezhsky, Altai, Beregovoi, Avangard, Vyaznikovsky 37 badanaa ku haboon salting.
10 talooyin beeraleyda caajis ah ama sida loo sameeyo meel loo dhigo meel lagu nasiyo?
Intee jeer ayay dhacdaa markaad timaaddo guriga si aad u nasato oo natiijo ahaan, maalmaha oo dhan isku xiga waxaad sameysaan ganacsi iyo dalxiis oo keliya? Qaar badani waxay qabaan dhibaatooyin isku mid ah, inkasta oo dalkaygu uu jeclaan lahaa in aan ku raaxeysto oo aan ku raaxaysto nabadda. Marka xigta, waxaan tixgelineynaa talooyin kaa caawin kara casriyeynta iyo bedelida aqalkaaga si ay u noqoto mid asal ahaan loo abuuro madadaalo.
10 dhirta ugu caansan ee qolka fadhiga
Cabbirka ballaadhan ee qolka fadhiga wuxuu fududeeyaa in la dhigo tiro badan oo dhirta gudaha ah. Waa maxay nooca wakiilada dhirta aan laga heli Karin qolka fadhiga ee guriga. Halkan waxaad ka arki kartaa geedo alwaax ah oo geedo ah, geedo dheer oo masduulo ah iyo geedo kale oo qalaad leh in milkiilayaashooda aysan u tixgelin inay lagama maarmaan u tahay in la dhigo qolalka kale.
10 qawaaniin muhiim ah oo tayada sii kordhaya
Bannaanka u khibrad leh waxay leeyihiin cuntadooda u gaarka ah si guul leh u kobcaya yaanyada, kuwaas oo dhan kuwaas oo kala duwan. Iyada oo aan loo eegin sida aad u wadaagtid cuntooyinkaas, qof walba waxa uu ka heli doonaa wax cusub iyaga oo raacsan guushooda. Talooyinka hoos ku qoran waxay hubinayaan inay yihiin xaalad cusub oo natiijo fiican leh. Ku socoshada waddo fudud, laakiin si fiican u socota, xitaa bilawga ayaa helaya natiijo wanaagsan.
12 fikrado ah si aad u diyaarisid geeska jilicsan ee gurigaaga
Maqnaanshahaagu ma yahay meel aad u raaxaysato si aad u nasato, ama aad go'aansatid inaad siisid goobta hore ee soo jiidashada cusub? Waxaanu kuugu soo bandhigaynaa si aad u barato fikrado xiiso leh, taas oo ay ugu dambeyntii qaadato ugu yaraan waqtiga, lacagta iyo dadaalka. Natiijadu waxay noqon doontaa mid weyn - xitaa geeska ugu dheer, oo aanad tixgelin sida aag wax ku ool ah, wuxuu noqon karaa meel wanaagsan oo loogu talagalay wakhtiga firaaqada.
6 badi khaladaadka inta badan ee ku saabsan hoyga iyo diyaarinta qaboojinnada jiilaalka
Marka koritaanka-aadanku ku koraan hareeraha dhexe ee xilliga dayrta, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo dalagyada ubaxa ee xilliga jiilaalka. Laakiin tani waa in la sameeyaa sida ugu saxsan ee suurtogalka ah, ka dib talooyinka xirfadlayaasha qibrada leh. Si kastaba ha ahaatee, bannaanka u badan inta badan khalad sameeyo. Dadku waxay ku khaldaan khuraafaadka caadiga ah ee ku saabsan diyaarinta aabaha xilliga qaboobaha.
7 geedaha ugu karsan ee beertaada
Imaanshiyaha dalka ka imanaya magaalada cufan ka dib toddobaadka shaqadu waa laban laaban yahay haddii hawadu ka buuxsanto ariishyada quruxda badan ee ubaxyada ubaxyada. Nacfacidda raaxeysiga ah ayaa ciyaari doonta doorka aromatherapy, kaa caawinaya inaad nasato, wuxuu kor u qaadi doonaa naftaada, hagaajinta caafimaadkaaga. Marka ubax, geedaha intooda badani waxay saliid noqdaan saliid muhiim ah oo leh caraf udgoon.
5 nooc oo ah daaweynta dacha ama sida looga tago walaaca dhan albaabka?
Dad badan, fasaxa xagaaga waa mid xiiso leh oo faa'iido leh xataa xitaa munaasabadda. Dhamaantiis, meeshiiska waxaa lagaa rabaa inaad ku taal meel bannaan oo dibedda ah, iyo gurigaaga oo aad dareentid raaxo badan. Waxaa intaa dheer, waxaa jira siyaabo kuu ogolaanaya inaad sameysid (oo aad sameysid) beertaada gaarka ah oo leh jawi hal abuur leh iyo bogsiin.
8 beeraha qaladaadka aasaasiga ah
Meelaha beertaada kuu gaarka ah waxaad sameyn kartaa go'aano kala duwan. Go'aankani wuxuu noqon karaa mid wax akhrin kara, oo aan dhammaystirnayn wax akhrin, iyo iyada oo aan loo eegin waayo-aragnimada, labadaba waa la sameyn karaa. Sidaa daraadeed, si aad u ogaatid ficil-gooyooyinka aasaasiga ah ee loo dulqaadan karo waa arrin khuseysa labada bilawga iyo beerta khibrad leh.
Beeralayda iyo mulkiilayaasha guryuhu waxay jecel yihiin inay heystaan ​​riwaayad muuqaal ah oo ku yaala dhulkooda. Nasiib darro, riyadan quruxda badani waa mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan ee dilka ah, sidaa daraadeed inta badan lama ogaan. Laakiin dadka jecel dabiicadaha dabiiciga ah ee dhagaxyada dabiiciga ahi waa inayan ka dhicin oo ay ka daadiyaan rabitaanka lagu qurxiyo sawirkaaga - marka laga reebo ceelka alipine ee caanka ah waxaa jira jardiinooyin badan oo kale, oo aan yareyn, laakiin dhaqaale badan ayaa abuuraya.
Biyuufka wax ku oolka ah ee qorraxda - iftiinka ama xaqiiqda?
Xasuuso erayga "ku dhufo iyo xuduudaha"? Tani waa qiyaas ahaan kiisaska horumarinta farsamooyinka ku salaysan nanoparticle. Mararka qaar waxa ay u muuqataa in saynisyahannada ay baddaleen aasaaska caalamiga ah, oo ku khasbaya shuruucda jimicsiga aasaasiga ah in ay siiyaan bini aadamka. Waxyaabaha xiisaha leh waxay ka muuqanayaan isku xirka bayoolajiga iyo fiisikiska.
Astaamaha aasaasida dacha
Meelaha banaanbaxa si ay ula kulmaan dhammaan filashooyinka milkiilayaasha, waxay u baahan doonaan naqshad karti leh. Tani waa meel aan rabno inaan nasasho ka qaadno magaalo qaylin ah, oo ka shaqeyso beerta iyo sariiraha beerta. Sida loo qalabeeyo dhulkaaga, si ay wax walba u raaxaystaan, maangal ah oo raaxo leh? Tani waa nooc ka mid ah sayniska.
Naqshadeynta maskaxda: jiir
Inta badan, mulkiilayaasha dacha casriga ah waxay heleen dhulalkan inta lagu jiro qaybinta xitaa inta lagu jiro Midowga Soofiyeedka. Waqtiyadii hore, dadku si gaar ah uma aysan dhicin dhulalka ugu habboon, inta badana waxay bixiyaan fursado aan la heli Karin baahida beeraha iyo beeraha kale. Laga soo bilaabo halkan, goobo badan ayaa u muuqday in aan si siman loo qaabeynin oo ay leeyihiin dhinacyo kala duwan iyo heerarka sare.
Beerta xayawaanka ah: ugu yeer cawska beertaada
Ma leedahay guriga beertaada ama gurigaaga? Sida xaqiiqda ah waxaa ku jira cimriga quruxda badan. Iyo, dabcan, waxaad u baahan tahay inaad sii wadato joogitaankaaga boggaaga raaxo leh. Sidee? Tani waa mid aad u fudud oo, waqti isku mid ah, hawsha adag. Waa lagama maarmaan in la dhiso beerta quruxda leh. Waxay ku xiran tahay duulimaadkaaga.
Sidee u qabataa cunug wadanka gudihiisa ah?
Cottage - meel cajiib ah! Wadajir dadka waaweyn waxay ku raaxaystaan ​​dabeecadda iyo carruurteena. Sidaa daraadeed ma aha mid caajis ah, waxaan soo bandhignaa dhowr fikrado ah oo ka dhigi doona xubnaha kale ee da'da yar ee qoyskaaga oo xiiso leh. Fiisooyinka Da'yarta Caadi ahaan, ma aha wax adag in dadka waaweyni u qoondeeyaan cunuga qayb dhulka yar ee beerta. Sii isaga qalab amaan ah, waxaad siisaa xulasho ah miraha dhirta fudud, waxay xasuusinayaan waqtigii jaridda dhirta iyo waraabinta.
Maxay tahay pergola iyo sababta loogu baahan yahay goobta?
Pergola - dhisme gaar ah beerta. Ereyga waxaa laga soo qaatay luqada Talyaaniga, halkaas oo macnaheedu yahay "kordhin" ama "dhismo". Waxaa loo samayn karaa sidii dhismo gooni ah ama loo dheereeyo dhismaha weyn (tusaale, guri ama jikada xagaaga). Pergola - wax u dhaxeeya taageerada qashinka ah ee looxyo iyo qalab beerta.
Karinta dalka: Maraq Dovga
Maraqa qabowgu waa qayb aad u xiiso badan oo ka mid ah caadooyinka culus. In Russia, dad badani waxay ogaanayaan okroshka iyo maraq beetroot, maraq Buluuga on kefir waa la yaqaan. Qodobka Dovgi waa maraq kefir, laakiin xaqiiqadani maaha mid xiiso leh, laakiin sidoo kale waa fursad lagu kariyo wakhti kasta oo sanadka ah. Ka dib oo dhan, maaddooyinka ayaa had iyo jeer la heli karaa.
Qajaar la mid ah "dabeecad" ama koraan Momordica
Maanta waxaan eegnaa hal warshad aad u qallafsan. Waxay leedahay waxyaabo badan oo faa'iido leh, dhadhan aan caadi aheyn, waxaana loo yaqaan "geedka qadhaadh ee Chinese". Intooda badan waxaa loo yaqaan 'Momordika' magaca qarsoodiga ah. Si kooban oo ku saabsan dhirta Momordica, dhab ahaantii, waa magaca guud ee tiro badan oo dhirta - canabkiina sanadlaha ah iyo canabka ah.
Waxaan isku diyaarineynaa sariiraha sanadka soo socda: maxaa iyo meesha lagu beero?
Mid ka mid ah welwelka ugu weyn ee beerta xilliga Dayrta waa baahida loo qabo qorshaynta waxa dhici doona sanadka soo socda iyo halka uu ku kori doono. Laga soo bilaabo sariirta loogu talagalay qajaarka, iyo taas - waayo, kaabajka, waxay ku xirnaan doontaa, tusaale ahaan, bacriminta dayrta ama jiilaalka jiilaalka ee toonta iyo basasha. Aan eegno sida si sax ah uga fekereyso wareegga dalagga ee xajmiga.
Sida loo kobciyo "geedka rasmiga ah", beeritaanka iyo daryeelidda yaanyada beerta
Ku qanacsanaanta kala duwan ee yaanyada "mucjisada balcony." Talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan koritaanka iyo daryeelidda guriga iyo beerta
Qodobbada waxtarka leh ee xididdo, calaamadaha iyo ka hortagga
Dhamaan jadwalka! Qajaarinta qajaarka geedo ee March, February, April
Beetroot waxaa iska leh qoyska reer Amaranth (oo hore u ahaan jiray reerka Marie). In lahjadaha koonfurta Ruush waxaa jira magaca lahjadda "Buriak". Noocyo: xididdo xidid iyo caleen. Dalagyada dalaggu waxay leeyihiin qaab aad u sarreeya, qallalan ama qaab wareegsan iyo hilibka casaan mugdiga ah. Qoraalka ayaa sharraxaya sida loo diyaariyo miraha guriga iyo sida loo koro noocyo kala duwan ee xididdo, iyo halka ay ugu fiican, oo ay ku jiraan noocyada sonkorta macaan. Read More
Miyaa suurtogal in la cuno xididdo loogu talagalay dadka qaba boogga calafka iyo boogaha duodenal? Dhammaan wixii saameyn ah ee khudradda ku saabsan koorsada cudurka
Kombiyuutarada yaryar KMZ-012: dib-u-eegis, karti farsameed ee qaabka
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Wararka 2019